Labada wafdi ee ka kala socda maxaakiimta islaamiyiinta ah iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo aan weli iska soo xaadirin madasha shirka maanta uga furmayay Khartuum iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo ku adkeysatay in uu ka baaqdo kulanka Khartuum hadii uusan hoggaaminayn wafdiga dowladda. Ruunkinet 30/10/06
Wararka ka imaanaya magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaa ku waramaya in aysan weli iska soo xaadirin madasha shirka maanta uga furmilahaa magaalada Khartuum labada wafdi ee kala matalaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo midowga maxaakiimta ee ka taliya inta badan koonfurta Soomaaliya.
Wafdiga maxaakiimta ahaa horay u gaaray magaalada Khartuum in kastoo ay ka biyo diidsan yihiin wafdiga ka imaanaya magaalada Baydhabo ee uu hoggaminaya Amb. Cabdullahi Sheekh Ismaaciil.
Wafdigan oo la sheegay in uu ka kooban yahay 17 ruux ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya ayaan wata sida la sheegay qorsho ay si weyn u diidi doonaan maxaakiimta in kastoo wafdiga maxaakiimta ka socda aysan heshiis kale la saxiisan doonin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inta ay ciidamada Itoobiya joogaan magaalada Baydhabo iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya.
Dhanka kale, guddoomiyaha golaha baaralmaanka Soomaaliya xildhibaan Shariif Xasan ayaa si weyn u diiday in uu raaco wafdiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee aadaya magaalada Khartuum asagoo sida la sheegay ku tilmaamay in loogu talagay in la khiyaameeyo.
Guddoomiya Shariif oo haatan ku sugan magaalada Nayroobi ayaa si weyn u diiday in uu raaco wafdiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayadoo Xaabsade iyo Saransoor laga qaaday awoodii ay ku lahaayeen magaalada Baydho kadib markii la dul dhigay ciidamo itoobiyaan ah taasoo ka liftay in uu Saransoor isaga baxo magaalada Baydhabo.